February 7, 2020 - Myitter
ရန်ကုန်CBဘဏ်ပြီးတော့_မြိတ်မှာလဲအနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွား မြိတ်မြို့၊ ကန်ဖျားရပ်တွင် အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွား
February 7, 2020 Myitter 0
ရန်ကုန်CBဘဏ်ပြီးတော့_မြိတ်မှာလဲအနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွား မြိတ်မြို့၊ ကန်ဖျားရပ်တွင် အနုကြမ်းစီးမှုဖြစ်ပွား 7.2.2020 မြိတ်မြို့ ၊ ကန်ဖျားကုန်စိမ်းဈေးဟောင်းအနီး ဒေါ်တင်ကြူနေအိမ်တွင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ ရက်၊ ည ၈ နာရီခန့်က အနုကြမ်းစီးမှု ဖြစ်ပွားကြောင်းသိရပါတယ်။ ကန်ဖျားရပ်ကြီး၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်းသွယ်(၂) အိမ်အမှတ်(၁) ဒေါ်တင်ကြူနေအိမ်တွင် ၎င်း၏ သမီးဖြစ်သူ အေးမိုးသူ နှင့်တူ၃ […]
စင်ကာပူ အစိုးရက လိမ္မော်ရောင်အဆင့် သတ်မှတ်လိုက်ပြီးနောက် ကုန်တိုက်များတွင် ပစ္စည်းများပြတ်လပ်သည်အထိ ဝယ်ယူကြ ….
စင်ကာပူတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရတ်ကူးစက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ Disease Outbreak Response System Condition (DORSCON) အဝါရောင်အဆင့်မှ လိမ်မော်ရောင်အဆင့်သို့ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်တိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် စင်ကာပူရှိကျောင်းအားလုံးတွင် အားကစားပွဲများကျင်းပခြင်း၊လေ့လာရေးခရီးထွက်ခြင်း၊ အပျော်ခရီးထွက်ခြင်းများ စသည်တို့အပါအဝင် ကျောင်းတွင်း ကျောင်းပြင် activates […]
သံဃာတျောတှဆှေမျးခံကွှတာမွငျတာနဲ့ ကား၊ဆိုငျကယျ၊လူအကုနျရပျပွီး ရှိခိုးကွညျညိုကွတဲ့ မွို့
သံဃာတျောတှဆှေမျးခံကွှတာမွငျတာနဲ့ ကား၊ဆိုငျကယျ၊လူအကုနျရပျပွီး ရှိခိုးကွညျညိုကွတဲ့ မွို့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအမြားဆုံးနထေိုငျတဲ့ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံဟာ ကမ်ဘာမှာ အလှူအတနျးအရကျရောဆုံးလို့ နာမညျကွီးပါတယျ….. ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမွနျမာမြားရဲ့ အလှူဒါနရကျရောမှုကတော့ ပွောစရာမလိုအောငျကို ပွညျ့စုံလှနျးလှတာပါ…. ဒါ့အပွငျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမွနျမာတှဟော ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတှေ ဘုနျးဘုနျးတှကေိုလညျး ဆှမျးလောငျးတာ ကထိနျခငျးတာ အလှူဒါနပွုတာတှေ့ အမွဲလုပျလရှေိ့ပါတယျ…. ဒီတဈခါဖျောပွခငျြတာလေးကတော့ တကယျ့ကို လေးစားဖှယျကောငျးတဲ့ […]
လောင်ပြန်ပြီး မန်းလေး Level2တဲ့
လောင်ပြန်ပြီး မန်းလေး Level2တဲ့ 7-2-2020 နောက်တစ်မီးမန္တလေး 37-72×73ကြား မီးသတင်းရ level (1) (2) Than Htay ဒီသတင်းမတိုင်မှီ ကနဦး အခြားမီးသတင်းတစ်ခု 7-2-2020 မီးငြိမ်းပါပြီ မန္တလေး Hotel Hliton ပထမထပ် 26 လမ်း […]
မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ စစ်ကိုင်းမြို့တစ်မြို့ထဲသာရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဘဲဥထုပွဲတော် ….
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ စစ်ကိုင်းမြို့တစ်မြို့ထဲသာရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဘဲဥထုပွဲတော် စစ်ကိုင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၇ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ စစ်ကိုင်းမြို့တစ်မြို့ထဲမှ လွဲ၍ ကျန် မည်သည့် ဒေ သမှ ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ မရှိတဲ့ ပွဲတော် ၊သာမန် ပွဲတော်တွေနဲ့ မတူဘဲ ထူး ခြားတဲ့ ပွဲတော် ဖြစ်တယ် ၊ […]
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အရမ်းကို လူကြိုက်များနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းဆရာမလေးရဲ့ စိတ်ကူး ….
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အရမ်းကို လူကြိုက်များနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းဆရာမလေးရဲ့ စိတ်ကူး တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိပြီး ချီးကျူးလေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်လေ: ဆရာ/ဆရာမတွေဆိုတာ ကလေးတွေကို နာ ၃ နာနဲ့ စာသင်ကြားပေးနေသူတွေပါ… မိမိတို့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲ အနာဂတ်မှာ အားကိုးရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ငယ်လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ဒါ့အပြင် မိဘတွေကိုယ်စား […]
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တရုတ်မှာ သေဆုံးသူ ၆၃၀ ကျော်လာကာ ပိုးတွေ့လူနာ ၃၀,၀၀၀ ကျော်ဖြစ်လာ …..
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၃၆ ဦးရှိလာကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ကာ ပိုးကူးစက်လူနာ ၃၀၀၀၀ ကျော်ခဲ့ပြီလို့အစိုးရက သောကြာနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၇) မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် စတင်ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာ ပြည်နယ်မှာ ၇၃ ဦး ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရောဂါဖြစ်စဉ်နဲ့ […]
CB Bank ကို အနုကြမ်းစီးကာ ဗုံးထောင်ထားခဲ့သည့် CCTV ဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ် ….
ယနေ့နက်နက် ၇ နာရီခန့်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြောက်ဒဂုံ ၃၅ ရပ်ကွက်က CB Bank ကို သေနတ်နဲ့ အနုကြမ်းဝင်စီးပြီးတော့ ပိုက်ဆံသိန်း ၆၀၀ ကို ယူပြီး မိုင်းထောင်ထားခဲ့တဲ့ CCTV ရုပ်သံထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ဒီရုပ်သံထဲမှာဆိုရင် ဘဏ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးဖြစ်သူ ထံက ပိုက်ဆံကို ခြောက်လှန့်တောင်းယူနေပြီးတော့ မိုင်းအတုကိုထားခဲ့တဲ့ […]
ထိုင်းကနေ သုံးပြီးသား Facemask တွေဝင်နေပါတယ်…. (ညီအကိုများ အထူးသတိထားကြပါ)
Homeထိုင်းကနေ သုံးပြီးသား facemask တွေဝင်နေပါတယ် (ညီအကိုများ အထူးသတိထားကြပါ) ထိုင်းကနေ သုံးပြီးသား Facemask တွေဝင်နေပါတယ် (ညီအကိုများ အထူးသတိထားကြပါ) ကြားသိရသမျှ February 7, 2020 Naethit ထိုင်းကနေ သုံးပြီးသား facemask တွေဝင်နေပါတယ်။ ကြိုးတွေဝါနေပါတယ်။ ပစ္စည်းထုပ်ပိုးတာသေသေသပ်သပ်မရှိ။ ရောဂါကာကွယ်ဖို့ facemask […]
ဖုန်းဘေလ် ခိုးနေတဲ့ ဖုန်းအော်ပရေတာ ကုမ္ပဏီတွေကို လွှတ်တော်က တရားစွဲတော့မည် …..
ဖုန်းအသုံးပြုသူများ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငွေဖြတ်တောက်မှုများအတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ရေးရာကော်မတီကတစ်ဆင့် တရားစွဲဆိုရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကော်မတီနဲ့ ညှိုနှိုင်းပြီးတော့ ဒါတရားစွဲဖို့ထိ လုပ်နေတယ်။ လိုအပ်ရင် အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းတာမျိုး ဆက်သွယ်ရေး […]